DHAMMAAN WAXTARKA FAA'IIDOOYINKA IYO WAXYEELADA DIGIRTA, WAA MID WAXTAR LEH - SOOSAARKA DALAGGA
Peas: qiimaha nafaqada, halabuurka, sifooyinka faa'iido iyo waxyeelo
In jardiinooyin badan iyo keruubyo, dadka ku koraan digir - warshad aad u qabow ah oo siinaya digirta jilicsan oo leh dhadhan wacan. Aan isku dayno inaan ku baraaranno khudradda cagaaran ee soo dhow oo aan ogaano faa'idooyinka ugu muhiimsan iyo faa'iido darrada.
Qiimaha nafaqada iyo halabuurka digirta
Qiimaha nafaqada ee 100 g oo ah digir cagaar ah waa 55 Kcal oo keliya, qadar isku mid ah oo khudradda ka kooban 5 g oo borotiinno ah, 0.2 g oo dufan, 8.3 g oo karbohidraat ah iyo 5.5 g oo fiyuus ah.
Noocyada khudraddan ka kooban waxaa ka mid ah macmuur badan, sida potassium, calcium, silicon, magnesium, sodium, sulfur, fosfooraska, iyo sidoo kale dhowr waxyaalood raad: aluminium, boron, vanadium, iodine, cobalt, copper, molybdenum, nickel, kalay, selenium, chromium iyo fluorine. Dad badan oo ka hor inta aysan cunin digirta badanaa waxay qabaan su'aallo - nooca fitamiinada ayaa ku jira. Jawaabta su'aashan waxaa laga heli karaa il kasta oo laga heli karo macluumaadka, maadama saynisyahannadu ay caddeeyeen in khudradani faa'iido leh ay tahay qayb ka mid ah fitamiinada A, C, E, H, PP iyo Group B.
Waa muhiim! Digirta digirta ee faraha badan ee cagaaran maaha kuwo ku habboon cunista, maadaama loogu talagalay inay quudiyaan xayawaanka.
Waa maxay digirta waxtar leh
Iyada oo daraasad qoto dheer oo ku saabsan waxa ku jira digirta faa'iido leh, waxaad ka heli kartaa faa'iido weyn ee khudradda this - waxaa si fiican u nafaqo sababtoo ah tirada badan ee borotiinka qudaarta, halka jidhka ma aha culeys weyn by calories xad-dhaaf ah. Faa'iidooyinka digirta jidhka waa in la wanaajiyo waxqabadka muruqyada wadnaha iyo cadaynta xididdada dhiigga.
Iyada oo dhaqdhaqaaqa jirka ee kor loo qaado si loo soo celiyo dheelitirka tamarta iyo waxqabadka ayaa ka caawin doona sifooyinka wanaagsan ee nafaqada ee digirta. Noocyada carbohydrates-adag-u-digaha ah ee digirta waxay ku dari doonaan tamarta isboortiga degdega ah iyo madadaalada firfircoon.
Marka cuno suxuunta leh waxyaabaha ka mid ah dhirta cagaaran, sifooyinka faa'iido leh ee dhirta jidhka bini-aadmiga ayaa lagu muujiyey caadaynta habdhiska dheef-shiid kiimikaadka. Kiriimyada qudaarta ah iyo walxaha kala duwan ee cunnada ayaa cunaya dhammaan nidaamka muhiimka ah ee waxqabadka bini aadamka.
Waxtarka anticarcinogenic ee digirta ayaa u oggolaanaya in loo isticmaalo si dadka looga ilaaliyo saameynta walxaha shucaaca. Warshadaani waxay ka qayb qaadataa burburinta iyo soo saarida asiidhyada asaasiga ah ee asaasiga ah, taas oo saameyn ku yeelanaysa ka hortagga suuxinta iyo muujinta dermatiga.
Sidee loo kariyaa digirta la kariyey?
Digirta la kariyey waa caloric iyo nafaqo leh, waxay leeyihiin dhadhan wacan waxayna awoodaan inay si dhaqso ah u qanciyaan gaajada muddo dheer. Mashiinka macaanku wuxuu leeyahay qaabab faa'iido leh sida caadigeynta shaqada ee dheef-shiidka iyo joojinta caloosha. Khudradda waxay ka hortagtaa cuncunka cuntada, waxay kordhisaa rabitaanka cuntada, waxayna xakameysaa heerka cadaadiska, sidoo kale waxay kaa caawineysaa inaad ka bogsato dhiig-yaraanta.
Boorashka Pea waxa ku jira qadar badan oo borotiinka qudaarta ah, taas oo ah mid aan lagama maarmaan u ah dhisidda murqaha iyo nafaqada jimicsi. Digirta la kariyey ee la karkariyey borotiinka, taas oo lagama maarmaan u ah hawlaha muhiimka ah iyo shaqaynta caadiga ah ee dhammaan nidaamyada.
Maaddaama ay ka kooban tahay antioxidants, macdanta qallalan waxay leedahay qaabab faa'iido leh sida daaweynta cudurrada maqaarka iyo ka hortagga muuqaalka dhibaatooyinka maqaarka - taas awgeed waa lagama maarmaan in karkariyo boorashka digirta oo ay leeyihiin qadad aad u fiican.
Digirta la kariyey waxaa lagula talinayaa in la cuno dadka qaba cudurrada atherosclerosis, cudurada wadnaha, iyo qaaxada - nafaqooyinka ka dhigi kara ficilka khudradda sidan oo kale antibiyootikada, iyada oo aan waxyeellayn xubnaha kale ee aadanaha.
Ma taqaanaa? La helay digirta digirta la dubay, oo da'doodu ka badan tahay 10 kun oo sano.
Ma cuni karaa digir cows ah
Badanaa su'aasha ayaa soo baxaysa, ma macquul ma tahay in la cuno digir cadiif ah? Cunto-yaqaanku ma siin karaan jawaab aan caadi ahayn, sababtoo ah digirta cowsku waxay yareeyaan waxtarka maadada dheef-shiidka, waxay sababaan carqalado dheecaanka xuubka caloosha iyo mindhicirrada, iyo, marka ay u nugul yihiin, waxay keenaan unugyada gudaha ee dheecaanka. Dhanka kale, digirta cows ah waxaa ku jira xaddiga ugu badan ee nafaqooyinka, taas oo hoos u dhacaysa inta lagu jiro daaweynta kulaylka.
Iyada oo ay ku yar tahay faytamiin A ee jirka bini'aadamka, waxaa lagu muujiyey in ay isticmaalaan digir caano ah, waxyaabaha ugu muhiimsani ma aha in la isku daro qaadashada alaabooyinka leh waxyaabo nuurad sare ah. Sidaa darteed, qof kasta shakhsi ahaan ayaa go'aaminaya inuu isagu cuni karo rooti cows ah, isagoo tixgelinaya astaamaha jirkiisa iyo jawaab celinta khudraddaas.
Laga soo bilaabo isticmaalka caanaha ee digirta cusub waxaa jiri doona faa'iido aan shaki ku jirin jirka, kaas oo lagu quudin doono fiitamiinkiisa, iyo sidoo kale micro-iyo macruufka, iyo qaybo badan oo waaweyn waxay keeni karaan abuurka gaaska iyo dhibaatooyin kale.
Maxaa kale ee faa'iido leh ee dhirta jidhka - isticmaalka joogtada ah ee 150-200 g khudradda cusub toddobaadkii ayaa fududeynaya neefta iyo ka hortagga dhacdooyinka cudurkan.
Faa'iidada ugu weyn ee isticmaalka digirta macaan ee macaan ee yar yar ee loogu talagalay ragga waxay tahay in la kordhiyo rabitaanka galmada, si caadi ah u shaqeeysiiso hawsha galmada iyo ka hortagga waxtarka leh ee prostatitis.
Waa muhiim! Of dhammaan noocyo of digirta la soocay waa ugu faa'iido badan.
Sida loo isticmaalo digirta daawada dhaqameed
Dhakhaatiirta dadku waxay si firfircoon u isticmaalaan qaybo ka mid ah warshadda dhirta cagaaran ee daaweynta cudurada bini-aadamka.
Inta badan waxaa loo adeegsadaa wakiilka daweynta maskaxda, la isticmaalo taas oo lagu muujiyo saamaynta duriinka, iyo sidoo kale awoodda ay u saaraan dhagaxyo yaryar iyo ciid oo ka yimaada kelyaha. Si dhagaxyada loo yareeyo xajmiga iyo si aan xanuun lahayn oo laga saaro jidhka, digirta la kariyey ayaa la qalajiyey, la jajabiyey bur, ka dibna 3 qaado oo isku qasan oo qallalan ayaa lagu soo dhejiyey galaas biyo karkaraya oo lagu mudo 6 saacadood. Maraqkan waxaa la qaadaa 100 ml 3 jeer maalintii muddo 15-20 maalmood ah.
Labo shaaha oo bur ah oo laga helo sprouts of peas waxay faa'iido u tahay in laga takhaluso madax xanuunka, haddii aad u isticmaasho dardaaranka halkii aad ka isticmaali laheyd xanuun joojiyaha, laakiin waxay kaloo noqon karaan waxyeello haddii aad isticmaasho khudaar, ama aad khudradda ka soo baxdo. Beedka laga helo burka laga dhaliyo digirta cagaaran ayaa kuu oggolaan doonta inaad ilowdo caloosha.
Shaki kuma jiro in la cuno digirta cagaaran ee la cuni karo, sababtoo ah isticmaalka joogtada ah wuxuu caawin doonaa inuu hoos u dhigo heerarka sonkorta dhiigga, taas oo aad muhiim u ah sonkorowga, si looga qaado sunta iyo kolestaroolka jirka jirka, iyo sidoo kale in laga hortago muuqaalka kansarka.
Wixii daaweynta cudurada maqaarka waxaa lagula talinayaa in la isticmaalo burka digirta oo biyo lagu qasi karo: Isku daridda daawadan waxaa lagu dabaqaa meelaha ay saameeyeen finanku, canbaar, boogaha, 15 daqiiqo dhowr jeer maalintii.
Isticmaalka digir lagu kariyo
Maadada kariska ee loo isticmaalo dalal badan oo adduunka ah. Digirta qasacadaysan ayaa ah qayb ka mid ah waxyaabaha ugu jecel saladhka, cunto fudud iyo suxuunada dhinaca.
Boorash baradho ah ayaa loo isticmaalaa sida buuxsamida pies, caanaha, burka digirta laga sameeyo baastada, canjeelada iyo canjeelada. Waxaa jira tiro badan oo cuntooyin ah oo la kariyo maraq doofaar, labadaba cusub iyo qallalan iyo qasacadaysan, maraquna waxay noqon kartaa qaabkeeda caadiga ah ama qaabka maraq kareemka.
Ma taqaanaa? Sannadaha qaarkood ee dalalka yurub, miraha digirta ah waxay awoodi karaan inay cunaan dad aad u taajir ah.
Sida loo isticmaalo digirta koolejka guriga
Maaddada kondhomeynta guriga, digirta waxaa loo isticmaalaa sidii wakiil dibudhisid oo kicinaya koritaanka iyo dib u soo nooleynta unugyada, wuxuu hoos u dhigaa geeddi-socodka gabowga iyo hoos u dhaca maqaarka. Tani, cunidda digirta digirta dhowr jeer toddobaadkii ayaa ku filan.
Miro baradho ah ayaa lagu daboolay wejiga qaabka maaskaro 10-daqiiqo ah uu hagaajin doono culeeyska, xitaa maqaarka maqaarka oo uu ku quudiyo fitamiino.
Maydhis maraq leh, waxaad yareyn kartaa finanka iyo bararka wajiga.
Isticmaalka joogtada ah ee digirta iyo macdanta caleemaha ayaa leh saameyn dib-u-dhalasho, hagaajinaysa aragtida, kor u qaadista kobaca iyo dib-u-dhalashada unugyada.
Dumarka qaarkood waxay dalbadaan finan yaryar oo bur ah oo wejigooda leh lakab khafiif ah, taas oo badaleysa budada.
Isticmaalka digirta, haddii ay suurtagal tahay in lagu waxyeeleeyo jirka bini'aadamka
Waxaan la kulannay digirta iyo waxyaabo badan oo faa'iido badan leh, laakiin waa in aynaan ilaawin khilaafaadka. Qaadashada digirta laguma talinayo dadka qaba dhibaatooyinka dheefshiidka iyo xaaladaha guud ee mindhicirka, iyo sidoo kale haweenka inta lagu jiro nuujinta, si looga fogaado suuxdinta iyo xanuunka caloosha.
Tilmaamayaasha digirta si ay uga faa'iidaystaan ​​oo ay u hagaajiyaan muuqaalka qofka ayaa loo diidi doonaa kuwa ku dhuftay cudurro sida thrombophlebitis, cholecystitis iyo neefritis, maadaama dabacadani ay waxyeello u geysan doonto qaabka ay u sii xumaanayso cudurrada.
Waa maxay midhaha waxyeellada leh ee dadka waayeelka ah iyo dadka la silcaya? Maaddooyinka cagaarka ah ee la nadiifiyo waxaa loo yaqaanaa awoodda ay u ururiyaan cusbada uric-urta - "kudheer" ee xubnaha, xubnaha iyo xubnaha gudaha ee qofka, taasina waxay sii xumeyneysaa habka cudurku wuxuuna yareynayaa saameynta daaweynta.
Ciladda enzyme iyo dareen-celinta xasaasiyadeed ee shakhsiyeed waa arrin ka-hor-imaad ah oo la cuno subagga.
Marka si dhexdhexaad ah loo isticmaalo, suxuunta pea waa dhadhan fiican oo caafimaad leh, waxayna kaloo kala duwanaan kartaa liiska maalinlaha ee qoyska. Maqnaanshaha iska-horimaadyada iyo waxyeelooyinka kale, ha dafirin naftaada isticmaalka khudradan.